Nas 951 days ago
intelligentguy 951 days ago
Punter 950 days ago
Nas 950 days ago
Punter 949 days ago
Nas 949 days ago
Punter 948 days ago
Nas 948 days ago
Punter 947 days ago
Nas 947 days ago
Punter 946 days ago
bokaman 927 days ago
my lil poem, trying my best
घंटा घंटे आफुनै धटा जसते , DHOTI KO GAS MA GHANTA
हेनिकेन कि कोरोना
give me PK Nas bro
Person required at 610@tx jester urgent houston tx...
First lady of white house IF........
Visitor is reading ACCOMODATION NEEDED
Visitor is looking at Event: Momo Party
Visitor is reading बिद्या - के पि को प्रेम प्रसंग
Visitor is reading U19 cricket world cup Nepal Vs South Africa semi final
Visitor is reading Tobacco Alternative
[VIEWED 49363 TIMES]
Posted on 12-09-15 12:44 PM Reply [Subscribe]
Posted on 12-14-15 7:09 PM [Snapshot: 4552] Reply [Subscribe]
"..पुतली चिलायो जस्तो छ नि "
खोइ तेस्तै तेस्तै भन्न पर्ला... पुन्तर ब्रो !!
"...हालेको हो तपाई को केरा"
धत् ! पुन्तर ब्रो ! एस्तो कुरो नगर्नुस न तपाई नि.... लाज लाग्छ नि .... !!!
"धाइत तपाई को पो जिन्दगि जिन्दगि हो यार "
होइन पुन्तर ब्रो ! मेरो जिन्दगि खाते छ पुन्तर ब्रो ! पांच दिन घण्टा हान ...घण्टा हानेर डेरामा चाउचाउ बसाल, अनि खाउ, सुत ! दुइ दिन छुट्टीमा जाँड, रक्शी धोक्यो ! फेरी आफ्नो यहा साथीको नाममा एक जना काममा इन्दियेन साथि मात्र छ ! त्यो मुजी कहिले बाहिर निस्किंदैन ... काम बाट फर्क्यो... प्ले स्टेसन खेल्छ, छुट्टिमा पनि प्ले स्टेसन ... म चाइ एक्लो फिल नहोस भनेर शुक्रबार, शनिबार सोसियल लाइफ खोज्न क्लब, बार, स्ट्रिप क्लब तिर जान्छु ! ज्याप भएर डेरा फर्किन्छु ! दिउसोको तिन -चार बजे सम्म सुतिन्छ... नेपालीहरु कोइ छैन गाउमा ... तेसैले पनि नेपाली बोल्न साझामा आउँन पर्छ ! साझामा पनि येसो मनको कुरो राख्न पुन्तर ब्रोमात्र छ ...... एक दम उदेक लाग्दो रुटिन छ मेरो पुन्तर ब्रो !
Posted on 12-14-15 7:12 PM [Snapshot: 4566] Reply [Subscribe]
Posted on 12-14-15 7:13 PM [Snapshot: 4568] Reply [Subscribe]
Posted on 12-14-15 8:07 PM [Snapshot: 4662] Reply [Subscribe]
Rato tika nidhrma talaka talkio
Posted on 12-15-15 11:17 AM [Snapshot: 5083] Reply [Subscribe]
स्ट्रिप क्लब तिर जान्छु ...
स्तिप क्लुबमा हरुनी कतिको ठोक्नु हुन्छ ब्रो ?
ठुलो चाक ठुलो दुध भाको केटि हरु कतिको हुन्छन ब्रो
अनि ब्रो त्यो अन्तिम को रातो लाउने केटि औदी राम्रो लग्यो ब्रो मलाई त एक पटक पर्यो कुरा गर्नुस न!!!
Last edited: 15-Dec-15 11:17 AM
Posted on 12-15-15 6:37 PM [Snapshot: 5341] Reply [Subscribe]
स्ट्रिप क्लबको तरुनीहरु ठोक्न मिल्दैन पुन्तर ब्रो ! ठुलो चाक र ठुलो दुधभाका केटिहरु थुप्रै छन् तर म चै जहिले नि एउटी सानो बुबु भाकी एसिएन स्ट्रिपरको लागि जान्छु पुन्तर ब्रो ! उनि हेर्दा ठ्याक्कै नेपाली जस्ती छिन ! तेही भएर मलाइ उसको सार्है माया लाग्छ पुन्तर ब्रो !
पुन्तर ब्रो, मलाई राम्री लागेको मायालुलाइ तपाई जहिले नि पापी आँखा लगाई हाल्न हुन्छ ! मलाई पनि उनि सार्है मन पर्न थालेको छ अचेल ! उनलाई मैले एउटा मिउजिक भिडियोमा देखेर पहिलो हेराईमा नै मन पराको थिए ! अनि पछि, को हुन् उनि भनि साझामा नै सोधेको थिए ! साझाको एक जना ब्रोले मलाई उहाको नाम रिशिता भनेको थियो पुन्तर ब्रो ! रिशिता सार्है हृदय नै छुने खालको केटि छ पुन्तर ब्रो ! शि लूक्स सो इनोसेंटली बिउटिफुल ! आइ एम टोटल्ली ड्रन टुवार्ड्स हर !
त्यो सेतो सारीमा हो मेरी प्यारी रिशिता ....
Posted on 12-16-15 11:53 AM [Snapshot: 5815] Reply [Subscribe]
त्यो सेतो सारीमा हो मेरी प्यारी रिशिता नाज ब्रो मलाई त रिसिला को दुध लै पिसिला गर्नु मन लग्यो नि त !!! सारै राम्री छे हो मोरी त !!! जहिले नि एउटी सानो बुबु भाकी एसिएन स्ट्रिपरको लागि जान्छु पुन्तर ब्रो ! त्यो सानो बुबु तपाई मुख भित्र पुरै अताउचा नाज ब्रो ? मलाई त कुरा सुन्दा खेर त्यो बुबु हेर्न मन लग्यो के त्यो मोरी को बुबु येस्तै थियो हो ?
जे होस् नाज सरकार लै न सकिने भयो हरेक हप्ता सानो ठुलो बुबु खायो बस्यो अनि जाड अनि जेनी माया लै चुप्प खायो ब्रो को लादो को चै एकदम ठुलो भाग्य रहेछ है!!!
Posted on 12-16-15 5:31 PM [Snapshot: 5979] Reply [Subscribe]
"रिसिला को दुध लै पिसिला गर्नु मन लग्यो"
ह्या पुन्तर ब्रो ! तेस्तो नभनदिनुस न तपाई पनि ...मैले मन पराको मेरी रिस्तालाइ ! तेस्तो सुकुमार कोमल हृदय भाकी केटिको बारे ...तेस्तो सोच्नुनी पाप हो !
Posted on 12-16-15 6:10 PM [Snapshot: 6019] Reply [Subscribe]
Posted on 12-17-15 10:44 AM [Snapshot: 6437] Reply [Subscribe]
तेस्तो सुकुमार कोमल हृदय भाकी केटिको बारे ...तेस्तो सोच्नुनी पाप हो ! तेस्तो सोचेको होइन ब्रो अब केटि जति नै राम्री भए पनि उसको बुबु त भगवान ले लु गरि खा भनेर बनेको हो नि त तेही भएर मैले यो मैया को बुबु खान कोसिस गरेको हो!!!! तेही भएर खानु पर्छ बुबु!!!
Posted on 12-17-15 11:36 AM [Snapshot: 6475] Reply [Subscribe]
"बुबु त भगवान ले लु गरि खा भनेर बनेको हो "
हो पुन्तर ब्रो ! केटिहरुको बुबु खान पाउनु हाम्रो मौलिक हक र अधिकार हो ! येस्मा कुनै दुइ मत छैन ! तर पुन्तर ब्रोले मेरी प्यारी प्रियंकाजी र मेरी प्यारी रिस्ताजीको बुबुमा आँखा लाउन समेत बन्चित गरिएको कुरो, येही धागो मार्फत बिनम्र अवगत गराउन चाहन्छु ! साथै प्रियंका कार्कीजी र रिस्ताजी माथि नाज ब्रोको मात्र एकाधिकार भएको बेव्हरा पनि जनाउन चाहन्छु !
धन्यवाद पुन्तर ब्रो !
Posted on 12-17-15 11:48 AM [Snapshot: 6479] Reply [Subscribe]
बरु पुन्तर ब्रोले मलाई मन नपर्ने यी दुइ आइमाईको बुबु जति खाँदा नि मलाई केहि फरक पर्दैन ! थोपदा हेर न यी भालुभुतलीहरुको !
इसाई मिसनरी दलाल अन्जु पन्त
पत्रकार बन्धुहरुलाइ हात लगाउने फुंडी निशा अधिकारी !
Posted on 12-17-15 12:23 PM [Snapshot: 6531] Reply [Subscribe]
तर पुन्तर ब्रोले मेरी प्यारी प्रियंकाजी र मेरी प्यारी रिस्ताजीको बुबुमा आँखा लाउन समेत बन्चित गरिएको कुरो, येही धागो मार्फत बिनम्र अवगत गराउन चाहन्छु ! साथै प्रियंका कार्कीजी र रिस्ताजी माथि नाज ब्रोको मात्र एकाधिकार भएको बेव्हरा पनि जनाउन चाहन्छु ! लु नाज ब्रो एस्तो कुरा न गरम !!! अनि आज हामी दुइ दाजुभाइ मिलेर आन्सबंदा गरु!!! ल म मेरो भाग मा प्रियंका र उसको बुबु , पुतली लिन्छु भने तपाई को भाग मा रिस्ताजीको बुबु परेको छ!!! येदि तपाई लै यो कुरा मन परेन भने सर्बचा आदलत मा मुद्दा दाहर गर्नुस ल !! लु म चै अब प्रियंका को बुबु खान गए ल त मेरो भाग मा तेही परेको छ!!!
Posted on 12-17-15 6:20 PM [Snapshot: 6731] Reply [Subscribe]
पुन्तर ब्रो ! फिलहालको लागि अंश बन्डा गर्ने कार्य नगरे कसो होला ?
कति हिस्सी परेकी छिन हौ यी मेरी प्यारी रिस्ता ! म त् मर्छु होला हौ उसलाई हेरेर !
Posted on 12-18-15 11:29 AM [Snapshot: 7079] Reply [Subscribe]
कति हिस्सी परेकी छिन हौ यी मेरी प्यारी रिस्ता ! लु यो मायालु को बिहे भए सकेको हो नाज ब्रो एसको त पोते लागको छ बा !! जे भए नि एक पटक गर्न कृपया मिलिय दिनु न नाज ब्रो !!! फिलहालको लागि अंश बन्डा गर्ने कार्य नगरे कसो होला ? अंश बन्डा भै सक्यो ब्रो अब तपाई को तरुनी लै नी एक पटक गर्ने हो अनि हिसाब मिल्छ!!!
Posted on 12-18-15 5:38 PM [Snapshot: 7233] Reply [Subscribe]
पुन्तर ब्रो ! तपाई किन येति साइको पल्टिन भाको भने ? मैले रोजेको मायाहरूलाइ नै तपाईले किन रोज्न परको ? संसारमा प्रियाँकाजी र रिस्ताजी मात्र छन ? मैले मनपाराकोलाइ तपाईले किन आँखा गाड्न भाको यार ? एस्तो नगरिदिनुस न ! ल तपाईको लागि मैले राम्री नेपाली साथिहरु खोजिदिएको छु, मेरी प्रियाँकाजी र रिस्ताजीको साटो ! राम्री छिन नि यी दुइ नि, होइन र ?
Posted on 12-18-15 5:40 PM [Snapshot: 7234] Reply [Subscribe]
यो सरि लगाउन भाकी पनि राम्री हुनुहुन्छ ! तपाईलाइ कस्तो लाग्यो पुन्तर ब्रो ?
Posted on 12-18-15 5:42 PM [Snapshot: 7240] Reply [Subscribe]
मेरी प्यारी रिस्ता मलाई नै मनपर्छ ! उहा कति धेरै राम्री हुनुहुन्छ हगि पुन्तर ब्रो ?
Posted on 12-19-15 11:15 AM [Snapshot: 7583] Reply [Subscribe]
तपाई किन येति साइको पल्टिन भाको भने ? म तेस्तो सिएको पल्टेको होइन ब्रो !! म त मेरी प्रियंका लै २००५ देखि माया गर्देइ आएको छु ब्रो बरु रिस्ताजी लै २०१५ देखि माया गर्दिए छु !! तपाई रिस्ताजी लानुस मेरो प्रियंका भयो आज औपचारिक रुप मा रिस्ताजी तपाई को भयो तेस्को बदलामा कृपया मेरी प्रियंका जी माथि आखा न लाउनु है!!! संसारमा प्रियाँकाजी र रिस्ताजी मात्र छन ? छ न त धेरै नै छन् तर यो मन तो प्रियंका हो !!! तपाईलाइ कस्तो लाग्यो पुन्तर ब्रो ? मलाई त एसको बुबु खान मन लग्यो ब्रो!!! मेरी प्यारी रिस्ता मलाई नै मनपर्छ ! उहा कति धेरै राम्री हुनुहुन्छ हगि पुन्तर ब्रो ? उहा धेरै नै राम्री हो तेही माथि उहा को ओथमा मेरो केरा भाको भए सुन मा सुगंदा हुन् थियो ब्रो!! हिजो रति तपाई को जेनी संग भेट भयो ब्रो येसो भेटेको बेला म साझाको खाते पुन्टर ले सोधेको छ भनेर भन दिनु ल!!!र मिल्छ भने जेनी को दुध पनि एउटा गिलास मा हालेर लिएर आउनु ल तेही दुध लेउ मेरो केरा लै पुजा गर्नु पर्यो कतै भाग्यो आउच कि मेरो केरा को ????
Posted on 01-07-16 6:00 PM [Snapshot: 9243] Reply [Subscribe]
ayo hai mero pani